Mavhidhiyo akachengetwa - peji 2 pa5 - afrikhepri hwaro
kugashira CATEGORIES VIDEOS
Unesco isingabatike tsika nemagariro (mavhidhiyo)
Pfungwa yenhaka isingagoneki yetsika yakaonekwa mukutanga kwa1990, mushure mekukurudzira kwe1989 pamusoro pekuchengetedzwa kwetsika dzechivanhu, uye senzira yekupokana nenhaka yenyika ...
Ramangwana reHupenyu Pasi Pano - Hubert Reeves (Vhidhiyo)
Mune iyi hurukuro, Hubert Reeves anotsanangura kutyisidzira kune ramangwana.
Deepak Chopra anotaura nezvekuporesa, quantum fizikisi uye epigenetics
Muvhidhiyo iyi, Deepak Chopra anotaura nezvekuporesa, quantum fizikisi, uye epigenetics.
Sayenzi uye Hupenyu - Kunzwisisa Hutano (Youtube Chiteshi)
Mukana wekunzwisisa, kudzidza, kunzwisisa, kujekesa, kuongorora. Aya mavhidhiyo akatsaurirwa kune sainzi kuti aongorore nyika yanhasi uye kutarisira nyika yemangwana. https://www.youtube.com/watch?v=kli7bXn-8KY&list=PLfn8aoVx3pNdQHYiTH_kd299g4m0VD6pw
Africa bika, ketani yakatsaurirwa kuAfrica cuisine. tsvaga izvo zvinonaka kwazvo zveruzivo rweAfrica! Africa Cook ndiyo yekutanga kirasi rwendo yekutsvaga iwo ma flavour ...
Teerera uye ona mavhidhiyo akakurumbira eAfrica (Vhidhiyo)
Teerera uye utarise akanakisa eAfrica clip. https://www.youtube.com/watch?v=puV5jZcTzJI&list=RDpuV5jZcTzJI
Zvinyorwa zvesainzi kuona
Akhenaton: muvambi wekutanga monotheism? (Video)
Munguva yehumambo hutsva, pharao anozoshanda mhirizhonga chaiyo mukufunga kwechitendero. Akhenaton achazungunusa vanamwari vazhinji mukuedza kumanikidza mwari mumwe chete: Aten. Akhenaton ...
Nhau kubva kutenderera pasirese - Alberto Basile (mavhidhiyo)
Dzidziso yaMambo Omraam Mikhael Aivanhov (Videos)
Master Omraam Mikhaël Aïvanhov, muzivi wechiFrench uye mudzidzisi wechiBulgaria mavambo, akauya kuFrance muna 1937. Chiri kushamisika kubva pakutanga pabasa rake kuwanda kwezvinhu zviri pasi pe ...
Iyo Yakasviba Rare Earth War (Vhidhiyo)
Pasi pasinganzwisisike simbi: terbium, samarium, cerium, gadolinium. Ivo vanozivikanwa vashoma, uye zvakadaro varipo kwazvo muhupenyu hwedu hwezuva nezuva. Mumaterevhizheni edu, makomputa, mafoni edu uye ...
Akazvitsaurira kumutungamiriri weANC, Nelson Mandela, akasungwa kwemakore makumi maviri nemaviri panguva iyoyo, asimbonanga ndomumwe wenyaya nziyo dzisingawanzoita nhoroondo. Mufananidzo wemunyori wayo uye muimbi munguva pfupi yapfuura ...
Page 2 pamusoro 5 Avant 1 2 3 ... 5 zvinotevera